Moe Pyae Pyae Maung and Sai Moe San's Wedding Photos | Myanmar Celebrity Couple Photos
Moe Pyae Pyae Maung and Sai Moe San's Wedding Photos
Myanmar Actress, Moe Pyae Pyae Maung and Sai Moe San held their wedding ceremony on December 5, 2009 at Sedona Hotel, Yangon. Myanmar famous actress, Eaindra Kyaw Zin threw wedding flowers and Htun Htun, Moe Aung Yin, Soe Pyae Thazin and May Thet Khine helped as the best men and bridesmaids for Moe Pyae Pyae Maung’s wedding ceremony.
သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင်နဲ့ စိုင်းမိုးစံတို့ရဲ့ လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က Sedona Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ပန်းကြဲပေးခဲ့ပြီး ထွန်းထွန်း၊ စိုးပြည့်သဇင်၊ မိုးအောင်ရင်နှင့် မေသက်ခိုင်တို့က သတို့သမီး၊ သတို့သား အရံများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
AnonymousDecember 11, 2009 at 2:32 PMကိုယ်ကြည့်လှလို့ယူတာမပာုတ်ဘူးချစ်လို့ယူတာဖြစ်မှာပေါ့သူငယ်ချင်းရယ်သဘောထားကောင်းရပြီးရောနင့်အပူမဟုတ်ဘူး......ကြားရဲ့လား????????ReplyDeleteAdd commentLoad more...